Inta La Ogyahay, Iyo Inta Aan La Ogeyn Weerarkii X/dhexe | Xaqiiqonews
Inta La Ogyahay, Iyo Inta Aan La Ogeyn Weerarkii X/dhexe
Qaar ka mid ah maxaabiis ku jirtay xabsiga dhexe ee Muqdisho ayaa sameeyey weerar loo adeegsaday qoryo, iyaga oo isku dayay in ay ka baxsadaan Xabsiga.
Dhacdada oo u muuqatay “qaabka filimaanta” camal ayaa ku bilaabatay galabnimadii isniinta 10 Agoosto, markii maxbuus uu qaab xirfadeysan qoriga kaga xoogay sarkaal ka mid ahaa ilaalada xabsiga oo magaciisa lagu sheegay Maskiinow.
Maxbuuska qoriga helay oo ilaa hadda aan magaciisa la shaacinin ayaa bilaabay toogasho, arintaasi oo keentay in gudaha xabsiga dhexe ay saacdo kooban isku badasho “furan dagaal”.
Wasiirka cadaaladda DF-ka oo warbaahinta la hadlay ayaa dhacdada xasbiga dhexe ku sifeeyey “Fal dambiyeed”isagoo sheegay in sharciga lagu qaadi doono waxa uu ugu yeeray “dadkii maxaabiista hubka u fududeeyey”.
Afhayeen u hadlay ciidanka Asluubta ayaa sheegay in weerarkii xabsiga dhexe uu sababay dhimashada 15 ka mid ah maxaabiista, 4 ka mid ahaa ilaalada iyo dhaawaca 8 qof,oo 7 ka mid ah ay ahaayeen maxaabiista.
Ka Baxsashada Xabsiga
Dhacdada xabsiga dhexe waxa ay u ekeyd muuqaal dhab ah oo ka tirsan filimkii daraamaatikada Ameerikaanka ee “prison Beaker”,marka laga reebo seddex waji oo ay kaga duwaneyd.
iyo goobta dhacdada
Warar hoose ayaa sheegaya in mid ka mid ahaa maxaabiista uu ka baxsaday xabsiga, qaar ka mid ah warbaahinta maxaliga ayaa sheegay in ninka baxsaday uu sitay qoray, isaga oo sii dilay bajaajle, ka dibna bajaajta ku baxsaday sida ay wararka sheegayaan.
Dhinaca Qarsoon ee Dhacdada
Waxaa jira tuhmada dhowr ah oo ka dhashay weerarkii “Xabsiga dhexe”, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa shir jaraa’id uu qabtay ku sheegay in weerarka ay ka dambeeyaan sirdoonka Soomaaliya NISA.
Dhanka kale waxaa jira warar hoose oo sheegaya in maxaabiista ay ku hubeysnaayeen bambooyin taasi oo sababtay shaki ka baxsan “maxbuus qori xoogay”.
Si Kastaba ha ahaate Df-ka oo dhacdada ku tilmaamtay mid qorsheysan ayaa magacawday guddi loo xil saaray baaritaanka wixii dhacay.